နောက်ဘဝမှ ပြန်ဆုံကြမယ်သူငယ်ချင်း… – PVTV Myanmar
·9months ago ·39 Comments
Like – 11K Share – 1032
2021-04-19 at 9:55 AM
အရှေ့ဆုံး ၁၀စက္ကန့်ကို နောက်videoတွေ မှာ မထည့်ပါနဲ့။ အပိုတွေ
2021-04-19 at 9:57 AM
ရင်ထဲ ထိတယ် ။ 😔
2021-04-19 at 10:00 AM
2021-04-19 at 10:06 AM
ကျဆုံးသူများကို မှတ်တမ်းတင်ထားမှုနဲ့ ပြသပေးမှုများ ‌အစီစဥ် သဘောကျပါတယ်။ အားလုံး မကျန်အောင်ကြိုးစားပေးပါရှင်။ ကျဆုံးသွားသူ သူရဲကောင်းများ ကိုလည်းဘယ်တော့မှမမေ့ ပါဘူး ဆိုတာ မှတ်တမ်းကို ခုလိုပြသပေးတာ ပိုပြီး ထိရောက်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် PV tv
2021-04-19 at 10:09 AM
ဒီtv အစီအစဥ်ကိုအစက သာမန် facebook page လောက်ဘဲထင်ထားတယ်။ ခုတော့ တကယ့်ရင်ကို ထိရှစေတဲ့ program တွေထုတ်လွှင့်တင်ဆက်နိုင်တဲ့ tv channel တခုပါလားလို့ ခံစားလာစေပါတယ်။ ဖန်တီးတင်ဆက်သူများကို ချီးကျူးဂုဏ်ပြုပါတယ်။
ဒီလို ညင်းပန်းနှိပ်ဆက်ခံရတာတွေ နေ့တိုင်းထုတ်လွှင့်ပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ် ပြည်သူတွေ သွေးမအေးသွားအောင်ပါ
Pho Pyone Cho says:
“အရင် အာဏာသိမ်း ဦးနေ၀င်းက ပြောဖူးတယ်၊
မြန်မာတွေ $မှတ် သည်းခြေ မရှိဖူး၊
မမေ့စတမ်း နာကျည်း ကြစမ်းပါကွာ…😥
Ko Paing Soe says:
2021-04-19 at 10:49 AM
ရင်ထဲမှာ ဆို့နင့်ကြေကွဲ ရပါတယ် ကလေးရယ်…
Su Phyo says:
2021-04-19 at 11:13 AM
Koory HM says:
2021-04-19 at 11:22 AM
2021-04-19 at 11:23 AM
Ko Ye Lay says:
2021-04-19 at 11:28 AM
နှလုံးသား တွေ ကြေမွ သွားသလိုပါဘဲဗျာ 😭😭😭
2021-04-19 at 11:30 AM
Hi Ko Min Ko Naing. It is reallyagood programme like this story . It is very touching to people’s heart with this kind of real heart broken stories. We really need to mention the stories of all those who sacrificed their lives in this revolution. Like you did for Win Maw Oo. We need to honour them. We need to comfort and support the heartbroken families. Otherwise , like in 1988, military’s propaganda had overwhelmed the real picture of the revolution. People might forget the pain and back to square one. We all know the military’s tactics of psychological warfare since 1988. They will doalot of religious matters, donations, promotions, peace talks and bribery. We really need to counteract this by constantly exposing their crimes against humanity and children.
2021-04-19 at 11:36 AM
2021-04-19 at 11:38 AM
2021-04-19 at 11:47 AM
2021-04-19 at 12:02 PM
2021-04-19 at 12:11 PM
5 ရက်ထဲနဲ့ face book အပြာဖြစ်သွားပြီ wow မိုက်တယ်နော် bro
2021-04-19 at 12:12 PM
Thet Naing Htoo says:
2021-04-19 at 12:17 PM
မအလ ဦးဆောင်တဲ့ အကြမ်းဖက်တစ်သိုက်ရေ မင်းတို့လည်းဒီမိသားစုတွေလိုမဖြစ်ကြပါစေနဲ့ပဲမေတ္တာပို့ပေးပါတယ်
2021-04-19 at 12:21 PM
ရင်ထဲထိတယ်ဗျာ ဒါပေမယ့် ကျွနပ်မငိုဘူး
မင်ပေဆပ်တာညိမျှတဲ့ ဒိမိုအနှစ်သာရ အပြည်အ၀ ရအောင် စစ်ခွေးတွေ ကိုလက်စားချေပေမယ်
2021-04-19 at 12:25 PM
Bobowin Bebe M says:
2021-04-19 at 12:50 PM
Zin Lin Phway says:
2021-04-19 at 1:13 PM
2021-04-19 at 1:33 PM
2021-04-19 at 2:01 PM
ရွှေ ကော့သောင်း says:
2021-04-19 at 2:41 PM
ရင်ထဲမှာ မျက်ရည်မိုးတွေ ရွာနေပါပြီ
Hline Thet Wai says:
2021-04-19 at 2:46 PM
ကျရပြန်ပြီ မျက်ရည်တွေ 😭
Theint Gyi says:
2021-04-19 at 3:21 PM
Christian Lynn Dung Tha says:
2021-04-19 at 4:03 PM
မျက်ရည်ဝဲတယ် စိတ်ခံစားမှုတခုမှာ ယေကျာ်း မိန်းကလေးနဲ့ မဆိုင်ဘူး
2021-04-19 at 7:42 PM
Honey Tint says:
2021-04-19 at 8:05 PM
2021-04-19 at 8:35 PM
စေခိုင်းသူ သတ်သူအားလုံးမိသားစုတွေနဲ့ပါ တူသောအကျိုးပေးမှာပါ
Kyaw Yell Mahn says:
2021-04-19 at 8:56 PM
2021-04-20 at 11:57 AM
Sapal Sapal says:
Susu Win says:
2021-04-20 at 11:12 PM
Public CDM (April 19/2021)